Nanamafy ny Emmoreg : « Hosamborina izay mandika lalàna » -
AccueilRaharaham-pirenenaNanamafy ny Emmoreg : « Hosamborina izay mandika lalàna »
Tsy hisalasala ny Emmoreg hisambotra ireo olona izay mihoa-pefy sy mandika lalàna,rahampitso asabotsy momban’ilay hestika efa nofoanan’ny Prefen’ny Polisy. Na ny filoha teo aloha, Marc Ravalomanana aza no tonga eny Mahamasina amin’io fotoana io, hanohitohina ny filaminam-bahoaka, dia hiharan’izay fisamborana izay ihany koa. “Hampihatra lalàna izahay”, hoy ny avy amin’ny Emmoreg.
Tsy hanavahana an’izan’iza noho izany io didy navoaka io, fa voakasika amin’izany avokoa ny olon-drehetra. Efa nofoan’ny “Prefet de police” ny fangatahana nataon’ny antoko Tim hanao hetsika eo amin’ny kianjaben’I Mahamasina, ka foana torak’izany ihany koa ny hetsika rehetra izay nokasaina hatao eny an-toerana.
”Ireo rehetra mbola manana eritreritra sy miziriziry ho eny Mahamasina, na dia efa fantatra izao aza fa tsy azo hatao , dia handraisana fepetra. Efa nahazo “récquisition” ny mpitandro ny filaminana hampihatra ny fahefam-panjakana.Izahay manokana ihany koa dia mahita fa tsy misy manana tombontsoa velively ny hisian’ny fifandonana”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny CIRGN Antananarivo, ny jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka. Nambaran’ity lehiben’ny CIRGN ity hatrany fa tsy hahatongavana any amin’izay fifandonana izay no antony hampahafantarana ny olona dieny mialoha fa tsy hisy ny fihetsiketsehana ho an’ny andron’ny rahampitso. Noraisina moa izao fepetra izao mba hiarovana ny ain’ny vahoaka sy tsy hiverenan’ny rà mandriaka tamin’ny 07 febroary 2009, izay ny mpitarika ity antoko ity no anisan’ny fositra tamin’izany.” Mahatoky tanteraka izahay fa manana vahoaka hendry eto Antananarivo , ka rehefa voalaza fa tsy azo hatao dia tokony mba samy hanaja izay ny rehetra”, hoy ihany ity jeneraly ity.
Mbola hisy moa ny fanentanana isam-pokontany hataon’ireo mpitandro ny filaminana amin’ny fandresen-dahatra ireo olona tsy ho eny Mahamasina.
Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny Cfoim, na ny fikambanan’ny fianakaviamben’ny karana mizaka ny zom-pirenena frantsay eto Madagasikara, dia fantatra fa navotsotr’ireo mpaka an-keriny ny faran’ny herinandro lasa teo i Kalidas . 16 andro no ...Tohiny
Dinika politika:EFA MIPETRAKA NY FITONIANA